Dowladda Puntland oo dalbatay in dib loo dhigo doorashada aqalka sare ee gobolada waqooyi iyo guddiga doorashada oo qaatay go’aankaas. | puntlandi.com
Dowladda Puntland oo dalbatay in dib loo dhigo doorashada aqalka sare ee gobolada waqooyi iyo guddiga doorashada oo qaatay go’aankaas.
Dowladda Puntland ayaa dalbatay in dib loo dhigo doorashada xldihibaanada aqalka sare ee gobolada waqooyi ,kuwaas oo uu xoogan ka taagan yahay, waxaana sidaasi Puntlandi u sheegay sargaal katirsan madaxtooyada Puntland.
Madaxweynaha dowladda Puntland oo saaka Muqdisho uga qeyb galaya shirka madasha qaran ayaa xubnaha madasha usheegay in la hakiyo doorashada aqalka sare ee gobolada waqooyi, kahor inta xal laga gaarayo khilaafka ka taagan xubnaha lagasoo dooranayo gobolada Sool iyo Sanaag.
Guddiga doorashada ayaa go’aankaan loo gudbiyay, waxayna iyagana soo saareen qoraal kooban oo ay ku cadeynayaan in dib loo dhigay doorashadii Lagu balansaa in sabtida maanta ah ay ka qabsoonto magaalada Muqdisho ee xarunta gobolka Banaadir.
Qoraalka guddiga ayaa lagu sheegay in doorashada loo baajiyay khilaafka ka jira doorashada xildhibaanada aqalka sare ee ka imaanaya Soomaaliland.